Adamant: fampiharana fandefasan-kafatra tsy fantatra anarana voafaritra maimaimpoana sy bebe kokoa | Avy amin'ny Linux
Androany, hanohy amin'ny fampiharana iray hafa an'ny instant messaging tsy dia fantatra amin'ny sehatry ny Linux, antsoina "Adamant".
ankapobeny, "Adamant" Izany dia fampiharana fampirimana eo noho eo loharano misokatra mifototra amin'ny teknolojia blockchain (blockchain), izay mivadika ho Wallet Crypto (Kitapom-bola Crypto) y Cryptocurrency Exchange System (Exchange).
"Adamant" fahefatra amintsika izany fampiharana fampirimana eo noho eo mihanaka, izay multurpose sy descentralised ihany koa amin'ny alàlan'ny teknolojia blockchain, satria, tamin'ny lahatsoratra teo aloha, izay manasa anao izahay hamaky aorian'ny nahavitana ity publication ity dia nanoratra izahay Juggernaut, Sphinx ary Status. Anontaninay fohifohy izao manaraka izao:
"Juggernaut, Sphinx ary Status dia tsy vitan'ny hoe manana tombony mahaliana amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra, fa koa ho mekanisma na fomba fandoavam-bola, satria mifototra amin'ny teknolojia blockchain." Juggernaut, Sphinx ary Status: fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo.
1 Adamant: Hafatra tsy mitonona anarana voafidy
1.1 Inona no atao hoe Adamant?
1.2 Endri-javatra sy fampiasa asongadiny
1.2.1 Filazana tsy fantatra anarana sy tsiambaratelo
1.2.2 Ny fanapariaham-pahefana sy ny Blockchain
1.2.3 Kitapom-bola Crypto
1.2.4 Rafitra fifanakalozana Cryptocurrency
1.2.5 marary mitsika
1.3 Fampahalalana fanampiny
1.3.3 Sarin'ny sary
Adamant: Hafatra tsy mitonona anarana voafidy
Inona no atao hoe Adamant?
Raha fintinina, ny tranokala ofisialy, mamaritra ny fangatahana toy izao:
"Rindrambaiko fandefasana hafatra tsy fantatra anarana itsinjaram-pahefana".
Na izany aza, araka ny nohazavainay tamin'ny fiandohan'ny famoahana dia a fampiharana fampirimana eo noho eo de loharanom-baovao misokatra mifototra amin'ny teknolojia blockchain (sakana) izay mivadika ho Crypto Wallet (Kitapom-bola Crypto) ary Cryptocurrency Exchange System (Fifanakalozana). Ary amin'ireo toetra ireo sy ny hafa dia hijery bebe kokoa eto ambany isika.
Endri-javatra sy fampiasa asongadiny
Filazana tsy fantatra anarana sy tsiambaratelo
Ireo mpampiasa dia tsy mila misoratra anarana na mampiditra fampahalalana. Tsy mampiasa mailaka na nomeraon-telefaona izy io. Na ny angona momba ny fitaovan'ny mpampiasa (toa ny adiresy na ny toerana misy azy). Ary koa, tsy manome data adiresy IP ho an'ny mpampiasa hafa izy io. Ny mekanisma momba ny tsiambaratelo sy ny encryption ampiasaina dia avo lenta. Ny mekanika fandefasan-kafatra dia afaka mampiasa ny tambajotra Tor ho tsy fantatra anarana.
Ny fanapariaham-pahefana sy ny Blockchain
Ny hafatra itsinjaram-pahefana dia tsy miankina amin'ny governemanta, orinasa ary mpamorona, noho izany, tsy misy afaka mifehy, manakana, manafoana, mametra na manivana kaonty. Ny hafatra rehetra dia voahodina miaraka amin'ny algorithman Diffie-Hellman Curve25519, Salsa20, Poly1305 ary nosoniavin'ny SHA-256 + Ed25519 EdDSA. Ny lakile manokana dia tsy mamela ny fitaovana efa niasa mihitsy. Ary ny filaharan'ireo hafatra sy ny maha-izy azy ireo dia azo antoka amin'ny alàlan'ny sehatra blockchain ampiharina.
Manolotra ny kitapom-bolan'ny Crypto mora ampiasaina izy io, hanamorana ny fidirana amin'ny tontolon'ny cryptocurrency haingana. Izy io dia manohana ireto vola crypto manaraka ireto: Bitcoin, Ethereum, Lisk, Dogecoin, Dash, ary Stably Dollar. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny passphrase ho an'ny fidirana rehetra-iray, manome ny mpampiasa fifehezana feno ny lakileny manokana. Ary mamela sy manamora ny fahafahan'ny mpampiasa mandray sy mandoa vola mivantana eo am-pifampiresahana amin'ny mpifandray aminy, na mampiasa Bot izay afaka mamindra ny asany.
Rafitra fifanakalozana Cryptocurrency
Manolotra rafitra fifanakalozana tsy mitonona anarana izy io, izay manamora ny fahafahan'ireo mpampiasa mividy / mivarotra (varotra) fananana nomerika, voatahiry sy nafindra teo aloha, tamin'ny alàlan'ny resaka.
Mampiasa ny fahazoan-dàlana GPLv3, izay ahafahana mandinika ny kaody loharano, ao anatin'izany ny node Blockchain, ny protokolon'ny serasera ary ny fampiharana fandefasan-kafatry ny mpanjifa.
Ho alaina amin'ny Linux, azonao atao izany kitiho ity rohy manaraka ity hita ao amin'ny tranonkala ofisialiny, ho fampidinana ny installer ao amin'ny «Endrika AppImage», The ankehitriny stable Version (2.7.0), ary raha mila fanazavana fanampiny dia azonao atao ny mitsidika mivantana ny anao tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub. Izy io koa dia manana installers ho an'ny Windows, MacOS, Android, iOS ary Tor, miampy mpanjifa amin'ny Internet.
Indray ny Fonosana AppImage, azo apetraka amin'ny alàlan'ny interface graphique izy, manome alalana azy hanatanterahana azy avy amin'ny mpitantana ny rakitra ampiasaina sy manatanteraka ilay fonosana avy eo miaraka amin'ny totozy. Rehefa novonoina dia afaka miditra isika amin'ny alàlan'ny famoronana sy fampidirana a passphrase avy amin'ny varavarankely voalohany. Raha mila tsipiriany misimisy momba an'io dia azonao atao ny manindry ny manaraka rohy.
Vantany vao tafiditra ao amin'ilay fampiharana ianao dia aseho ireto manaraka ireto fomba fijery sy antsipiriany:
Araka ny hita, "Adamant" mahaliana izany Rindrambaiko fandefasana hafatra eo no ho eo ny karazany PWA (Fampiharana an-tranonkala mandroso / fampiharana an-tranonkala mandroso) mendrika ny miezaka hahafantatra bebe kokoa an'izao tontolo izao DeFi.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Adamant», mahaliana sy tsy dia fantatra loatra fampiharana fandefasana hafatra eo noho eo loharano misokatra mifototra amin'ny teknolojia blockchain (blockchain) izay mifandimby, manompo toy ny Wallet Crypto y Rafitra fifanakalozana Cryptocurrency; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Adamant: Fampandehanana hafatra tsy mitonona anarana maimaim-poana ary maro hafa
Lehibe roa no vonona hifanatrika ary ny loka dia ny angon-drakitra